Indlu yeeNdwendwe eSilversand - I-Airbnb
Indlu yeeNdwendwe eSilversand
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRuud & Saskia
URuud & Saskia yi-Superhost
Indlu yethu yeeNdwendwe ikwindawo ekhuselekileyo, ezolileyo, ecocekileyo, engekude kumbindi. Ngaphakathi komgama wokuhamba kwindawo yokuthenga, iivenkile ezininzi, iivenkile zokutyela, kunye nevenkile yokubhaka yokwenyani ekupheleni kwesitrato, ngamafutshane, yonke into ifikeleleka ngokuhlala kamnandi. Sikunika indawo yokuhlala ephangaleleyo nemnandi.
Indlu yethu yeendwendwe ikwindawo ekhuselekileyo nethe cwaka kufutshane nombindi wesixeko. Kukumgama wokuhamba ukuya kwiivenkile ezinkulu, iindawo zokuthenga, iindawo zokubhaka kunye neecafe.
Le ndawo yenza ukuba le ndawo ibe yodwa, ime ngokugqibeleleyo, ngokunxulumene neziko, ubomi basebusuku, iivenkile, indawo yokutyela, yonke into ekumgama wokuhamba, ukanti ikwindawo ezolileyo nekhuselekileyo.
4.84 · Izimvo eziyi-52
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo nekhuselekileyo, kunye neGompert epholileyo kunye neWilhellminastraat ezindleleni ezisecaleni ezineevenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, indawo yokubhaka kunye neevenkile ezininzi ezimnandi.
Umbuki zindwendwe ngu- Ruud & Saskia
Igadi, kwibalcony, kwigumbi lokuhlala, indlu yeendwendwe inamagumbi okulala ama-5.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Paramaribo-noord